Somaliland.Org » 2009 » August
Wasiir Warancade oo lagaga yeedhsiiyay Riyaale hadhaco
Monday, August 31st, 2009 Comments Off
Weftigii Ingiriiska oo ka hadlay kulamadii uu la yeeshay dhinacyada Siyaasadda
‘Dawladda Ingiriisku waxay Doorashooyinka Madaxtooyada ee Somaliland ee soo socda u aragtaa inay xoojinayaan sumcaddii Somaliland ee Dimuqraadiyadda iyo xasiloonida. Waxyaabihii bilihii la soo dhaafay ka socday Somaliland waxay khatar gelinayaan sumcadda Somaliland ku caano-maashay. Sidaa darteed, waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada kala.. Qaybtii Labaad Kacdoonkii Shacabka ee Baarlamaanka Somaliland isugu yimid
Ma dhab-baa in M/weyne Rayaale Xanuun dartii ula kulmi waayay Weftiga Ingiriiska?
Kulankaas oo ka dhacay Qasriga Madaxtooyada, ayaa la sheegay in Madaxweynaha aanay kulankaa ku wehelin xubno Xukuumaddiisa ka tirsani, isla markaana uu kali ku ahaa. Hase ahaatee, waxay Wararku intaa ku dareen in Madaxweyne Rayaale ku wargeliyay Madax-dhaqameedka in uu ka aqbalay dhexdhexaadinta ay wadaan, hase ahaatee uu u qabtay ballan kale, kaas oo Wararku tibaaxeen in uu u sheegay in kulankaa dambe ay xubno Xukuumaddiisa ka tirsani ku wehelin doonaan. Madaxweyne Rayaale oo ka hadlay Arrimaha Doorashada iyo jawaabta Mucaaradka
Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyayaasha Axsaabta Mucaaradka ah ayaa jawaab ka bixiyay hadal la sheegay in uu ka soo yeedhay Madaxweyne Rayaale, kaas oo nuxurkiisu ahaa in uu hore u dalbaday Agabkii Doorashada dalka lagu galayay....